राइफलको गोली लागेर सेनाका जवान गम्भीर घाइते - SandeshMedia.com
ओलीको खाजा खर्च मात्रै ४ करोड !
विवाहपछि युवतीहरुमा आउने यस्ता छन् प्रमुख परिवर्तनहरू… अवस्य हर्नुहाेस्
अबदेखि लाइसेन्स निकाल्न नयाँ व्यवस्था : ट्रायलमा आफ्नै सवारी, कुन चरणको अंकभार कति ?
सन्तोष देउजाको फोटो राखि हार्दिक श्रद्धाञ्जली लेखेपछि भावुक हुँदै आए मिडियामा (हेर्नुस् भिडियो )
हेर्नुहोस श्रावण ६ गते बुधबार जुलाई २१ तारीखको राशिफल, जय श्रीदक्षिणकाली माता !
महिनावारी हुँदा सहन नसक्ने गरि तल्लो पेट दुखे के गर्ने ? समस्या र घरेलु उपाए
भोलि सार्बजनिक बिदा
फेरी देखियो काठमाण्डौ यस्तो संकेत ! ज्यान गुमाउनेको संख्या बढ्न थालेपछी चिन्ता थपियो
ह्वात्तै बढ्यो कर्मचारीको तलब शेरबहादुर प्रधानमन्त्री भएपछि
सन्दीप लामिछानेलाई पर्यो यति ठूलो समस्या
७ असार २०७८, सोमबार ०६:२०
७ असार, वीरगञ्ज । पर्साको वीरगञ्ज– ८ स्थित नेपाली सेनाको चण्डीप्रसाद गणका एक जना सिपाही गोली लागेर घाइते भएका छन् । पोखरिया नगरपालिका–५ सतवरिया घर भएका २२ वर्षीय श्यामबाबु प्रसाद चौहान घाइते भएका हुन् ।
उनको बायाँ चिउँडोको मुनि (घाँटीको भाग) र दाहिने आँखाको मुनि (अनुहारको भाग)मा एन–१६ राइफलको गोली लागेको घाउ छ । उनको घाउ हेर्दा गोली छेडेर बाहिर निस्किएको जस्तो देखिन्छ । आफैंले बोकेको राइफल पड्किएर उनी घाइते भएको सैनिक स्रोत बताउँछ ।
गणको कार्यालय भवन पछाडिको पोष्टमा सिपाही नरेश गुरुङसहित आइतबार साँझ ६ बजेदेखि ९ बजेसम्मको पोष्ट ड्युटीमा चौहान खटिएका थिए । ड्युटीमै रहेको बेला गएराति ८ः३५ बजे गोली पड्किएको आवाज आएको थियो । त्यतिखेर नरेश गुरुङ ट्वाइलेट गएका थिए । ब्यारेकभित्र रहेका सैनिकहरू गई पोष्टमा चढी हेर्दा श्यामबाबुले कोतबाट आफ्नै नाममा बुझेको एम १६ हतियारबाट एक राउण्ड फायर भएर घाइते अवस्थामा देखिएको थियो ।
उनलाई तत्काल उपचारको लागि नारायणी अस्पताल वीरगञ्जमा लगिएको थियो । त्यहाँबाट थप उपचारको लागि नेशनल मेडिकल कलेज वीरगञ्जमा रिफर गरिएको थियो । घाइते चौहानको गम्भीर अवस्थामा नेशनल मेडिकल कलेजमा उपचार भइरहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय पर्साले जनाएको छ ।
आत्महत्या प्रयास हो वा दुर्घटना हो भन्नेबारे अनुसन्धान भइरहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय पर्साका प्रवक्ता प्रहरी नायब उपरीक्षक ओम प्रकाश खनालले बताए । ‘घटनालगत्तै अस्पताल लगिएकाले धेरै रक्तश्राव हुन पाएको छैन । अवस्था गम्भीर नै छ,’ उनले भने, ‘उनले आफैंले गोली हाने वा दुर्घटनाबस थिचियो भन्नेबारे अनुसन्धान भइरहेको छ ।’
६ श्रावण २०७८, बुधबार ०२:४७
६ श्रावण २०७८, बुधबार ०२:४१
६ श्रावण २०७८, बुधबार ०२:३८
६ श्रावण २०७८, बुधबार ०१:४९
६ श्रावण २०७८, बुधबार ०१:३१